Wiricheya Cargo homwe, Backrest Cargo homwe - zvishongedzo & Zvikamu
CP2 (Arm Cargo homwe)
Cargo homwe yeparutivi armrest yako wiricheya. Yakakwana kune chero wiricheya mushandisi ari kutsvaga chishandiso chekuchengetedza chisati chambowanikwa mumusika. Iyi homwe isina mvura inochengetedzwa kunhandare yechero ipi wiricheya kushandisa yakakwirira unhu Velcro tambo uye inosungirirwa neiri nyore kushandisa zipi uye Velcro kurova. Nyore inowedzera kuti ikwane uye inosangana neyako nharembozha yekuchengetedza.
CP4 (Backrest Cargo homwe)
Cargo homwe yekumashure zororo re wiricheya. Yakakwana kune chero wiricheya mushandisi ari kutsvaga chishandiso chekuchengetedza chisati chambowanikwa mumusika. Homwe yekumashure inochengeteka nyore nekungotsveta homwe zvishwe kuburikidza neshure yekusundira tsvimbo. Iyi dhizaini inobvumira nyore kubvisa uye kuchenesa. Dhizaini yemvura dhizaini uye Velcro kurovera inobvumidza dhizaini chaiyo uye yakakodzera yekushandisa kwemazuva ese.
Kugadzirwa Kwemvura Velcro Tambo dzekumisikidza nyore uye kubvisa
Nyore kushandisa zipi kuchengetedza zvinhu kubva kudonha Yakanakira mavhiripu uye vanofamba
Inowedzera kuti ikwane zvinhu zvakaenzana zvakasiyana
Dhizaini isina mvura Velcro tambo dzekuisa nyore kuisa uye kubvisa
Nyore kushandisa zipi kuchengetedza zvinhu kubva kudonha Tambo kumusana kwechigaro kuti ugare kure nenzira yako
Yakakwana kune vanoshandisa vashandisi Inowedzera kuti ikwane zvinhu zvakaenzana zvakasiyana